देउता लाई भाकल गर्नु भनेको के हो ? के भाकल गरेपछि दिनै पर्छ ? नदिदा के हुन्छ ? पुरा पढ्नुहोस ! - Ujyalo Khabar
Next फेसबुकबाट कसरी पैसा कमाउने ? घरमै बसेर मोबाइल बाटनै कमाउन सकिने (तरिका सहित )